AMISOM oo la wareegtay amniga xarunta Shirka | KEYDMEDIA ONLINE
AMISOM oo la wareegtay amniga xarunta Shirka
Kadib markii madaxa AMISOM uu la kulmay Musharixiinta iyo Madaxda Maamullada, ayaa la isku raacay in amaanka Shirka iyo ka qeybgalayaasha ay sugaan Ciidanka Midowga Afrika.
MUQDISHO, Soomaaliya - Taliska Howlgalka Midowga Afrika ee AMISOM ayaa shaaciyay inuu la wareegay amaanka xarunta Afisyooni ee ka dhacay Shirka arrimaha doorashadda.
Francisco Madeira oo ah ergayga Midowga Afrika ayaa kulan la yeeshay Xasan Sheekh, Sheekh Shariif iyo dhamaan madaxa shanta Maamul, waxaana la isku afgartay in AMISOM la qaado mas'uuiyadda amaanka goobta Shirka iyo ka qeybgaliyaasha.
Tani waxay meesha ka saareysaa jahwareerkii iyo walaacii dhanka amniga kadib markii Deni iyo Axmed Madoobe ay diideen in Haram'cad ay la wareegaan mas'uuliyadda amniga Afisyooni, maadaama Ciidanka ay daacad u yihiin Farmaajo, lagana filan karo wax walba.
Waxaa jira Ciidanka Mareykanka ah oo soo gaarey Xalane, waxaana kasoo baxaya warar kala duwan sababta imaanshahooda. Wararka hordhaca ah waxay sheegayaan inay u yimaadeen sugida amanaka Safaaradda Mareykanka, maadaama gudaha Xalane ay soo galeen Ciidan Deni iyo Axmed Madoobe wataan, sidoo kalena Haram'ad oo Al-Shabaab u badan la geeyay.
Dhanka kale, wararka ayaa sheegaya in Farmaajo loo diiday inuu Ciidamo aan ahayn kuwa dharcadka gaar ah uu la galo Afisyooni, waxaana lagu muransan yahay maqaamka uu uga qeybgalaya Shirka, iyadoo mucaaradka ay doonayaan inuusan sheegan Madaxweyne, oo dhinaca ka qeybgaliyaasha la fariisiyo.
Isha ku haay KON, toos ugala soco wararka Shirka.